ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -39 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -40 →
Posted on August 10, 2011 by chitnge
(ဋ) မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်အကြောင်းနှင့် နိဂုံးချုပ်ခြင်း
၀ိပဿနာ သစ္စာ လောကုတ္တရာ ကျမ်းငယ်တစ်ဆူဖြစ်၍ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ် အကြောင်းတို့ကို ဖတ်ရှုမှတ်သားနိုင်ရန် ဆန္ဒများထ
ားရှိခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဤဆန္ဒတို့သည် အထိုက်အလျောက် ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ဟု စာရေးသူအနေနှင့် မျှော်လင့်ထားမိပေသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ပြည့်စုံပြီးမြောက် နိုင်ရန် ရေးသားပြုစုရသဖြင့် အချို့သော နေရာများတွင် အလျှင်စလို ဆောင်ရွက်လိုက်ရခြင်းများ ပါဝင်သွားပါ သည်။
သို့သော် ဆရာကောင်း ဆရာမြတ်၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်၍ သစ္စာဝါဒီဖြစ်အောင် အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်ခဲ့ရဘူးသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် မဂ်ဉာဏ်အကြောင်း ဖိုလ်ဉာဏ်အကြောင်း နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ မြတ် အကြောင်းတို့ကို ပီပီသသ တိတိကျကျနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မိမိဉာဏ်မှီသရွေ့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထုတ်ဖေါ်တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးစားလိုက်ရပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍ မဂ်ဉာဏ်အကြောင်း ဖိုလ်ဉာဏ်အကြောင်း နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ် အကြောင်းကို ဖြည့်စွက်ဖွင့်ဆိုရပါမူ . . . . .
မဂ်ဆိုသည်မှာ ကြည်လင်ခြင်း သဘောရှိသည်။ မကြည်မလင်ဖြစ်လျှင် မဂ်မဟုတ်ပါ။
ဖိုလ်ဆိုသည်မှာ ဧမြခြင်းသဘောရှိသည်။ ပူလောင်ခြင်းသဘော ရှိနေလျှင် ဖိုလ်မဟုတ်ပါ။
ရုပ်နာမ်ကို မလိုချင်ခြင်းသည် မဂ်သဘောဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်နာမ်ကို လိုချင်နေလျှင် မဂ်သဘောမဟုတ်ပါ။
တဏှာ သမုဒယကို ပိုင်းဖြတ်ပယ်သတ်ခြင်းသည် မဂ်သဘောဖြစ်ပါသည်။ တဏှာ သမုဒယကို လက်ခံခြင်းသည် မဂ်သဘောမဟုတ်ပါ။
မဂ်လေးတန် ဖိုလ်လေးတန် နိဗ္ဗန်ဟူ၍ လောကုတ္တရာတရား (၉)ပါးရှိရာ . . .
ပထမမဂ် ပထမဖိုလ်ရပြီးသူပင်လျှင် မဂ်ဉာဏ်အား ဖိုလ်ဉာဏ်အား ကြီးမားစေရန် ဆက်လက် ကျင့်ကြံ ကြိုးစား ပွားများနေရသည်သာဖြစ်သည်။ တရားရှင်ဟူသည် ဘယ်အဆင့်ရောက်လျှင်တော်ပြီဟု သဘောမထား ရပါ။ သဘောထားကြရိုး ထုံးစံနှင့် အဆုံးအမ အစဉ်အလာလည်းမရှိပါ။
ကိလေသာ အညစ်အကြေးဟူသမျှတို့ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းစေလျှက် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာနှင့်တကွ (၃၁) ဘုံကြီးကို အပြီးအပိုင် ခြေကန်ပိုင်းခြား ပယ်စွန့်နိုင်သည်အထိ ကြိုးစားရမည်ဟူသော အဆုံးအမ အစဉ်အလာသာ ရှိခဲ့ပါသည်။
မဂ်ဉာဏ်သည် ကိလေသာကို ဖြတ်တောက်ပြီးနောက် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ် အကြောင်းကို ထိုးထွင်းဆင်ခြင်ရသည်။ နိဗ္ဗန်ဟူသည် ဒုက္ခခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာ၊ တဏှာကုန်ခန်းရာပေတည်း။ တဏှာကုန်ခန်း စေသော အကျင့်သည် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သော အကျင့်ပင်တည်း။
တဏှာတိုးပွားစေသော အကျင့်သည် ဒုက္ခသံသရာ ၀ဲလည်စေသော အကျင့်ပင်တည်း။ နိဗ္ဗန်ရောက် လိုသူသည် တဏှာလျော့ပါးစေရန်၊ ကုန်ခန်းစေရန် ကျင့်ကြံထားရမည်သာတည်း။ ထို့ကြောင့် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗန်မြတ်ချမ်းသာတို့အကြောင်း အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား နားလည်လိုသူတို့သည် တဏှာလျော့ပါး ကုန်ခန်းစေ သော ပဋိပတ် အကျင့်များကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန်သာ လိုပါကြောင်း။
Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ. Bookmark the permalink.